ခရစ်ယာန်တွေဟာမကြာခဏဘုရားသခငျသညျနားထောငျအကြောင်းပြောဆိုပေမယ့်အဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး ဘုရားသခငျသညျကွားလြှငျနှင့်မည်သို့သူ့အသံကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသြဇာလွှမ်းမိုးအပေါ်ကျမ်း၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကြားနာအကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါဤမျှလောက်များစွာသောလူမီးလောင်ရာခြုံသို့မဟုတ်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်ခေါ်ဆိုသောစကားသံကိုမြင်ယောင်။ သို့သျောလညျးဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့အားပြောသောနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအားကြောင့်နည်းလမ်းတွေထဲကအတော်များများရှိပါတယ်:
သေချာတာပေါ့, မောရှေသည် In-သင့်ရဲ့-မျက်နှာမီးလောင်ရာခြုံရရန်လုံလောက်သောကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအမြဲကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီအဘို့အကြောင်းလမ်းဖြစ်ပျက်မထားဘူး။ တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးခေါင်းအတွက်ကိုယ်တော်နားထောင်ကြလော့။ အခွားသောကြိမ်ကိုစကားပြောသူတစ်ဦးဦးသို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့မျက်စိဖမ်းမိသောကျမ်းစာထဲမှာတစ်ဦးကျမ်းပိုဒ်ကနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘုရားသခငျသညျအတိုငျးအဆမဲ့သောကွောငျ့ဘုရားသခငျသညျအကြားအာရုံစဉ်းစားတွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းမှကန့်သတ်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ငါ၏သိုးတို့ကိုငါ့စကားသံကိုနားထောငျ, ငါကသူတို့ကိုသိပါ, ​​သူတို့သည်ငါ့ကိုလိုက်နာပါ။ (NASB)
သင်သည်လက်ျာသို့မဟုတ်အခါသင်ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ဖို့ကိုဖွင့်သည့်အခါနှင့်သင့်နားရွက် "ဒါဟာ၌ကျင်လည်, ဤနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်" ဟု, သငျသညျနောကျအမိန့်တော်ကိုနားထောင်ရကြမည်။ (တော်မူ၏)
ဝိညာဉ်တော်သည်မှန်သည်အဘယ်အရာကိုပြသထားတယ်နှင့်အပြည့်အဝအမှန်တရားသို့သငျသညျ လာ. အကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်မပြောတတ်ပါဘူး။ သူဟာငါ့ထံ၌ကြားထားပါတယ်သာသင်သည်အဘယ်သို့ပြောလိမ့်မည်ဟု, သူသည်သင်တို့ကိုဖြစ်ပျက်သွားခြင်းဖြစ်သည်အရာကိုသိပါစေပါလိမ့်မယ်။ (CEV)
ယေရမိ 33: 3
ငါ့ကိုမေးပါ, ငါကသင်မသိသောအရာကိုပြောပါလိမ့်မယ်နဲ့ထွက်မတှေ့နိုငျပါသညျ။ (CEV)
2 တိမောသေ 3: 16-17
အားလုံးအညီကျမ်းစာလာသည်ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းသည်နှင့်သင်ကြားရေးများအတွက်အသုံးဝင်သည်, ဘုရားသခင်၏ကျွန်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တိုင်းကောင်းသောအလုပ်အတွက်တပ်ဆင်ထားစေခြင်းငှါဒါတရားဆုံးနှင့်သင်တန်းများ, rebuking ။
ဟေဗြဲ 1: 1-5
အတိတ်ကာလ, ဘုရားသခင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာမှာအနာဂတ္တိကျမ်းမှတဆင့်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများ၌အကြှနျုပျတို့၏ဘိုးဘေးတို့အားမိန့်တော်မူသော်လည်း, ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌သူသည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအမွေခံခြင်းငှါခန့်ထားတော်မူသောသားတော်အားဖြင့်ငါတို့အားဟောပြောသောစကားဖြစ်ပါတယ်, အဘယ်သူကိုမှတဆင့်လည်းသူဝဠာဖန်ဆင်း ။ သားတော်သည်မိမိအစွမ်းထက်စကားအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရေရှည်တည်တံ့ဘုရားသခငျ့ဘုနျးတျော၏အရောင်နှင့်သူ၏ဖြစ်လျက်ရှိ၏အတိအကျကိုကိုယ်စားပြုသည်။
သူသည်အပြစ်အဘို့သန့်စင်ပေးပွီးနောကျသူသညျကောငျးကငျဘုံ၌အဘုရင်မင်းမြတ်၏လက်ျာဘက်၌ထိုင်တော်မူ၏။ သူကအမွေဆက်ခံထားပါတယ်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. သူတို့ထက်သာလွန်သည်အတိုင်းဒီတော့သူအဖြစ်အများကြီးသာလွန်ကောင်းကင်တမန်မှဖြစ်လာခဲ့သည်။ (ထို)
ဘုရားသခငျသညျလကျ၌လက်ကိုသွားယုံကြည်ခြင်းနဲ့နားကြား။ ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားရှိတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကပိုဖွယ်ရှိပွင့်လင်းသညျဘုရားသခငျကြားနာဖို့ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့ကကြိုဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင့ကြားနာပြီးတော့ ပို. ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအား။ ကိုယ်ကသာကျွန်တော်တို့ကိုအားကောင်းစေသည်တစ်သံသရာပါပဲ။
ဘုရားသခငျသညျပိုငျဆိုငျသူမည်သူမဆိုဘုရားသခင်၏စကားကိုဝမ်းမြောက်စွာစကားကိုနားထောငျ။ သငျသညျဘုရားသခငျသညျပိုင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်သင်သည်နားမထောင်ကြဘူး။ (NLT)
တစ်ဦးတည်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်တာကိုပေးသည်။ လူ့အားထုတ်မှုဘာမျှမစုံ။ ထိုအခါငါသည်သင်ပြောပြီအလွန်စကားများဝိညာဉ်အသက်လည်းဖြစ်၏။ (NLT)
သို့သော်သူက "မင်္ဂလာရှိသောထက်ပိုဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောငျကစောင့်ရှောက်သောသူတို့သည်များမှာ!" ဟုပြောသည် (NKJV)
ဟေဗြဲ 2: 1
ကျနော်တို့ရှေ့မြောသှားပါဘူးဒါကြောင့်ကျနော်တို့ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီအရာကို, အများဆုံးသတိထားအာရုံစိုက်ရပေမည်။ (ထို)
ဆာလံ 85: 8
သူသည်မိမိသန့်ရှင်းသူတို့အဖို့, မိမိလူမှငြိမ်းချမ်းရေးပြောမည်အဘို့အကြှနျုပျကို, ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုပြောမည်အဘယျသို့နားထောငျကွပါစသော ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုမိုက်မဲပြန်ဖွင့်မပေးကြကုန်အံ့။ (တော်မူ၏)
ငယ်ဘဝအမှတ်တရများ Quotes က 'Grinch ခရစ္စမတ်ခိုးယူဘယ်လို' 'နှင့်အတူအသကျရှငျလာကြ
အဆိုပါလူကြိုက်များသော Vote အနိုင်ရရှိမှုမရှိပါကသမ္မတအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်
အင်တာဗျူး: မန်ဒီ Moore က "ကိုသတိရပါမှတစ်ဦးကလမ်းလျှောက်" မှ
သင်က Chip & ဟန္န Gain အကြောင်းသိထားသည်မဟုတ်6အရာ
သကြား Crystal ပြဿနာများကြီးထွားလာ
အဘယ်မှာရှိသင့် Stuff ရောင်းဖို့
အဆိုပါ Raelians တစ်ဦးကအန္တရာယ်သတ်ဖို့ဖြစ်ပါသလား
သိပ္ပံနည်းကျ Method ကိုသင်ခန်းစာအစီအစဉ်
Oksana Chusovitina အကြောင်းသိထားမှ4အရာ
Brando, Littlefeather နှင့်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ
ပြင်သစ်စကား (ရိုးရှင်းသော Pass) တွင်တင်းမာနေအတိတ်
ပရိုဖိုင်းကို: Angonoka အတှငျး
ဟွန်ဒါရွှေ Wing Long Term အသုတ်စုံ